လက်ရေးက မိုက်တယ် မကေရေ ။ လက်ရေးကို ကြွေ သွားတယ် အဟဲ ။ ရည်းစားစာဆို လက်ရေးနဲ့ပဲ ကြိုက်ရတော့မလို လိုး)
ပုံဆွဲထားတာကလည်း မိုက်တယ် ။
လက်ရေးလေး သိပ်လှတယ်။ လက်ရေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့အရည်အချင်းကို မှန်းလို့ ရတယ်။
ကေ ဟာ ခေသူမဟုတ်...။
ကောင်းလှ ချည် လားညီမရေ။ ရေရေ လည် လည် လေးစား သွါးတယ်။ ကူး သွားပါရစေနော.် ကြိုက်လွန်းလို.။
လက်ရေးကို ကြည်.ခြင်း အားဖြင်. ငယ် စဉ်က ပညာ ကောင်းစွာ သင်ကြားခြင်းခံခဲ.ရမယ် လို. ဗေဒင် ဟော လိုပါတယ်။
လက်ရေးလေးကလဲ ဆွဲဆောင်နေ၊ အတွေးလေးကလည်းအမြဲလှောင်နေသလိုမို့ ၊ မခို့ တ
ရို့ နဲ့ ဧည့်ခံပွဲမှာ ပဲတွေအပြည့်နဲ့ ရိုက်လာမယ့် မကေရဲ့ ဓာတ်ပုံအစစ်လေးသာမြင်ချင်တော့
ညီမလေး များ- မမများ- သယ်ချင်းများ-
ဒါတောင် လက်ရေးက..ဘောပင်ကောင်းကောင်းရှာမရ လို့- ။ ရည်းစားစာ မြင်ရင်တော့..း)
လက်ရေးကို သဘောကျတယ် ယောက်ျားလေးလက်ရေးမျိုးလေးး
I sawalady turning her back on something. :)
မကေကလဲ... မိုက်တယ်..။(ဘန်းစကားပြောတာနော် ဟိုလိုဟုတ်ဘူး)
ပုံလေးနဲ့ စာလေးနဲ့ လိုက်မှ လိုက်။
ကေဟာ ပေသူ တေသူ ဆို ဒီလို ဘယ်ထုံးဖွဲ့ပါ့မလဲ :)
ပုံရော ၊ ကဗျာရော တကယ့် ကို လိုက်ဖက်လှပါတယ်။
ပေပေ တေတေ ခေသူမဟုတ် ဆိုပါတော့..
သူက ဒါမျိုးလေးလည်း ရသဟ...
အင်းသေချာတာကတော့ တို့များလို ကြွေသူမဟုတ်.. ခိ
ကေရေ… ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး…. ပကာသနတွေကို ခပ်ထိထိလေး သရော်ထားတာ… ဒါကြောင့်လဲ… နာမည်ကျော်တာကို… ပန်းချီလေးနဲ့ ကဗျာလေးက တကယ်လိုက်ဖက်တယ်…
ပေါက်ရေ- လူမှားနေတယ်ထင်တယ်။ အမက - သံရုံးဆိုရင်- အရမ်းကြောက်တယ်။ အဟဲ-
ကိုဇနိ- မြတ်နိုး-ညီမ စိုးမြတ်နန္ဒာ
ဘာရယ်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ ဒီခေတ်ကြီးထဲ..လက်ရေးနဲ့မရေးရတာ ကြာလို့- မေ့သွားမှာစိုးလို့- ပြန်ရေးကြည့်တာ။
ကိုအောင်သာငယ် နဲ့ မချိုသင်း
အဲဒီအမျိုးသမီးက..ကျမ ဟုတ်ပါဘူးနော်- ကျမက..ဆံပင်တောင်မရှိဘူး။ အဟဲ-
လင်း - ရွှန်မီ နဲ့မတန်ခူး-
ကဗျာလေး ကောင်းတယ်ဆိုလို့- အဟဲ- ကာရန်မရှိတာက လွဲလို့ပေါ့-
ပေပေတေတေ..မကြွေတကြွေ..ကေကေ အကြောင်း သိ တယ် မဟုတ်လား။
အားလုံးအား- ခင်မင်လျက်-း)))
ကဗျာလေး ကြိုက်တယ် အစ်မ။
သရုပ်ဖော်ပုံလဲ မကေဆွဲတာပဲလား။ ကဗျာကလဲ မိုက် ပုံကလဲ မိုက်၊ လက်ရေးကလဲ မိုက်။
နောက်ဆုံး ကဗျာလေးက " ကောင်းလှချီလား ဒေါင်းမမြကြည် "ဆိုရမလိုပါ့ ! အရည်အသွေးရှိတဲ့ သူက ဘယ်လိုပုံဖေါ်ဖေါ် တင်ပြမှုကောင်းနေတတ်တယ်။
မြကေတုစာအုပ်မှာ ရေးပေးတုန်းကတောင် သတိထားမိပါသေးတယ်။